Air Quality by Plume Labs: your daily Air Report 2.4.10 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ေဒါင္းလုပ္မ်ား 250 - 500
ဗားရွင္း 2.4.10 လြန္ခဲ့ေသာ3ရက္က
Application မ်ား က်န္းမာေရး & ႀကံ႕ခိုင္ေရး Air Quality by Plume Labs: your daily Air Report
Air Quality by Plume Labs: your daily Air Report ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
This massive update brings air quality forecasts you can trust to every city on earth. Full coverage from Alabama to Zanzibar to help you find fresh air. ‘Awesome app!’
What’s air quality like today? Is it the best time to go forarun? When should I go forawalk in the park with my children?
Air Report Global gives you real time pollution levels in your area, and forecasts of how air quality will evolve hour by hour over the next 24 hours—just likeaweather forecast.
Our environmental AI gives you customized recommendations on the best time to do your favorite activity without getting overexposed to pollution.
We bring you air quality insights you can act on—73% of our surveyed users say our app helped them make changes in their daily habits to breathe cleaner air.
And now the app works everywhere! After 18 months of hard work, our team of data and atmospheric scientists has builtaworldwide air quality forecasting model that uses satellite data to cover air quality in all of the world’s urban areas.
*Global coverage* Know what you breathe, wherever you are. Every urban area on the planet is now covered by real-time air quality data—as well as forecasts for the coming 24 hours.
*Fluid timeline* Slide along the timeline to see historical data. Pinch the screen to change timescales and reveal month by month air quality tracking.
*Detailed data* Tap the Plume cloud to expand the compass and get pollutant by pollutant breakdowns. Use our new Confidence Index to quickly confirm the accuracy of our modelling.
*Easily compare air quality worldwide* Swipe between cities to easily compare air quality. Our universal Plume AQI means you'll quickly see how the air measures up. Prefer your measurements in µg/m3 oralocal AQI air quality index? Easily adjust your settings in-app.
*Get the info you need* We've revamped our in-app FAQ and blog to make sure you can get the info you need to understand air quality around you and improve what you breathe.
*UX/UI overhaul* Our design team brought their A game to tweak the app's visuals and streamline user experience.
OUR USERS LOVE IT!
Awesome app! A must have if you care about your health and city.
Great app one ofakind. Air quality monitoring app inaclass of its own
Awesome useful application. And easy to use also.
It helpsalot to know when pollution is high. I always have medical breathing issues that I need to be careful of. Thanks for the help!
Top Notch App! This is reallyagreat app if you oraloved one has respiratory issues or you are just interested in tracking air pollution. There are many features andalot of ways to look at various pollutants in many major international population areas. I love the various history graphs showing short, medium, and long range views.
AIR REPORT IN THE PRESS
HuffingtonPost: “Beat the pollution with the Plume Air app.”
Evening Standard: “Pollution app tells you when it's 'safest' to go outside.”
TechCrunch: “A pragmatical approach to air pollution. Strikes the right balance between providing insightful information about air pollution and not being too complicated.”
VentureBeat: “With air pollution app, Plume Labs wants to prove that big data and open government can save lives.”
ဤသည်ကြီးမားသော update ကိုသငျသညျမွကွေီးပျေါမှာခပ်သိမ်းသောမြို့မှယုံကြည်စိတ်ချနိုင်လေကောင်းလေအရည်အသွေးကိုခန့်မှန်းတတ်၏။ ဇန်ဇီဘာမှ Alabama အဘိဓါန်ထဲကနေအပြည့်အဝလွှမ်းခြုံသင်လတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေကိုကူညီရှာဖွေပေးရန်။ '' Awesome ကို app ကို! '
ယနေ့ကဲ့သို့အလေထုအရည်အသွေးကိုဘာလဲ? ကပြေးသွားဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သနည်း ငါသည်ငါ့ကလေးတွေနဲ့အတူပန်းခြံအတွင်းလမ်းလျှောက်သွားသင့်သည့်အခါ?
Air ကိုအစီရင်ခံစာကမ္တာ့သင်သည်သင်၏ဧရိယာထဲမှာအမှန်တကယ်အချိန်ညစ်ညမ်းမှုအဆင့်ကိုပေးသည်နှင့်လေထုအရည်အသွေးကိုလာမည့် 24 နာရီ-ရုံရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်များကဲ့သို့ကျော်နာရီအားဖြင့်တစ်နာရီတိုးတက်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်လိုခန့်မှန်းချက်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် AI အညစ်ညမ်းမှုမှ overexposed တဲ့မရှိဘဲသင်၏အကြိုက်ဆုံးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ဖို့သင်အကောင်းဆုံးအချိန်ပေါ်စိတ်ကြိုက်အကြံပြုချက်များကိုပေးသည်။
ငါတို့သည်သင်တို့သင်တို့သည်ငါတို့၏စစ်တမ်းကောက်ယူအသုံးပြုသူ On-73% ကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကိုသူတို့နေ့စဉ်အလေ့အထပြောင်းလဲမှုများသန့်စင်သောလေထုကိုရှူရှိုက်စေကူညီပေးခဲ့သည်ဟုပြောလုပျဆောငျနိုငျလေထုအရည်အသွေးကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုဆောင်ခဲ့ရမည်။
ယခုမှာ app ကိုနေရာတိုင်းအလုပ်လုပ်တယ်! ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏ 18 လအကြာ, ဒေတာနှင့်လေထုသိပ္ပံပညာရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းကမ္ဘာ့မြို့ပြဒေသများ၏အားလုံးအတွက်လေထုအရည်အသွေးကိုကိုဖုံးလွှမ်းရန်ဂြိုဟ်တုဒေတာအသုံးပြုတဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်လေထုအရည်အသွေးကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမော်ဒယ်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
* ဂလိုဘယ်လွှမ်းခြုံ * သင်သွားလေရာရာ၌, သင်ရှူသောအရာကိုသိမှတ်ကြလော့။ ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်မှာရှိသမျှသောမြို့ပြဧရိယာကိုယခု Real-time လေထုအရည်အသွေးကိုဒေတာ-အဖြစ်လာမယ့် 24 နာရီခန့်မှန်းချက်များကဖုံးလွှမ်းနေပါတယ်။
* အရည်အချိန်ဇယား * သမိုင်း data တွေကိုကြည့်ရှုရန်အချိန်ဇယားတလျှောက်လျှော။ timescales ပြောင်းလဲလလေထုအရည်အသွေးကိုခြေရာခံခြင်းအားဖြင့်တစ်လထုတ်ဖေါ်ဖို့မျက်နှာပြင် pinch ။
* အသေးစိတ်ဒေတာ * အသံလိုက်အိမ်မြှောင်ကိုတိုးချဲ့ရန်နှင့်ညစ်ညမ်းမှုအံဝင်ခွင်ကျညစ်ညမ်းမှုရရန်ထွက်လာသည့်အပူရှိန်ကိုမိုဃ်းတိမ်ကိုထိပုတ်ပါ။ လျင်မြန်စွာကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်ဒယ်လ်များ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုအတည်ပြုဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်ကယုံကြည်မှုအညွှန်းကိန်းများကိုအသုံးပြုပါ။
* အလွယ်တကူ * ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကအလွယ်တကူလေထုအရည်အသွေးကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့မြို့ကြီးများအကြားပွတ်ဆွဲလေထုအရည်အသွေးကိုနှိုင်းယှဉ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်လောကလုံးထွက်လာသည့်အပူရှိန် AQI ဘယ်လိုလေအတိုင်းအတာအထိသငျသညျလျင်မြန်စွာမြင်ရပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုသည်။ μg / m3 သို့မဟုတ်ဒေသခံတစ်ဦး AQI လေထုအရည်အသွေးကိုအညွှန်းကိန်း၌သင်တို့၏တိုင်းတာမှုဦးစားပေး? အလွယ်တကူ In-app ကိုသင့်ရဲ့ settings ကို adjust ။
* သငျသညျ * ကျနော်တို့သင်န်းကျင်လေထုအရည်အသွေးကိုနားလည်နှင့်သင်ရှူသောအရာကိုတိုးတက်စေရန်လိုအပ်သောအချက်အလက်များရနိုင်သေချာစေရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ In-app ကိုမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများနှင့်ဘလော့ဂ်ပြုပြင်မွမ်းမံဖွင့်လိုအင်ဖိုရယူပါ။
* UX / UI ကိုစစ်ဆေးပြုပြင်တပ်ဆင် * ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီဇိုင်းအဖွဲ့က app ကိုဖွင့်ပုံရိပ်ယောင် tweaks နှင့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုချောမွေ့ဖို့သူတို့ရဲ့တစ်ဦးကဒီဂိမ်းကိုဆောင်ခဲ့၏။
Awesome ကို app ကို! သင်သည်သင်၏ကျန်းမာရေးနှင့်မြို့ဂရုစိုက်ပါလျှင်တစ်ဦးကရှိရမည်။
ဂရိတ် app ကိုတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာတစျခု။ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တဲ့လူတန်းစားအတွက် Air လေကြောင်းလိုင်းရဲ့အရည်အသွေးစောင့်ကြည့်ရေး app ကို
Awesome ကိုအသုံးဝင်သောလျှောက်လွှာ။ နှင့်လည်းအသုံးပြုရလွယ်ကူ။
ဒါဟာညစ်ညမ်းမှုမြင့်မားတဲ့အခါကိုသိရန်တွေအများကြီးကူညီပေးသည်။ အစဉ်မပြတ်ငါငါသတိထားရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်ကြောင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသက်ရှူကိစ္စများရှိသည်။ အကူအညီများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ထိပ်တန်း Notch App ကို! သင်သို့မဟုတ်တစ်ဦးကိုခစျြတစျခုအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်သင်လေထုညစ်ညမ်းမှုခြေရာခံပဲစိတ်ဝင်စားလျှင်ဒီကယ့်ကြီးမြတ် App ဖြစ်ပါတယ်။ အများအပြား features တွေအများအပြားအဓိကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူဦးရေဒေသများရှိအမျိုးမျိုးသောညစ်ညမ်းမှာကိုကြည့်ဖို့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ကျွန်မတိုအလတ်စားနှင့်ရှည်လျားသောအကွာအဝေးအမြင်များဖေါ်ပြခြင်းအမျိုးမျိုးသမိုင်းဂရပ်များကိုချစ်။
HuffingtonPost: "ပုထွက်လာသည့်အပူရှိန် Air ကို app ကိုအတူညစ်ညမ်းမှု Beat ။ "
Evening Standard: "က '' လုံခြုံဆုံး '' င်သည့်အခါညစ်ညမ်းမှု app ကိုအပြင်ဘက်သို့သွားရန်သင့်အားပြောပြသည်။ "
TechCrunch: "လေထုညစ်ညမ်းမှုမှတစ်ဦးကလက်တွေ့ကျကျချဉ်းကပ်။ လေထုညစ်ညမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်. အမြင်သတင်းအချက်အလက်များပံ့ပိုးနှင့်လည်းရှုပ်ထွေးဖြစ်ခြင်းမဟုတ်အကြားလက်ျာဘက်ချိန်ခွင်လျှာရိုက်။ "
VentureBeat: "လေထုညစ်ညမ်းမှု app ကိုအတူထွက်လာသည့်အပူရှိန် Labs ကကြီးမားတဲ့ data တွေကိုပွင့်လင်းအစိုးရဘဝတွေကိုကယ်တင်နိုင်သည်ကိုသက်သေပြနိုင်ဖို့လိုသည်။ "
Air Quality by Plume Labs: your daily Air Report အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Air Quality by Plume Labs: your daily Air Report အား အခ်က္ျပပါ
6jarjar6 စတိုး 2.53k 678.7k
Air Quality by Plume Labs: your daily Air Report ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
Runtastic Results Fitness & Home Workouts
APK အေၾကာင္း Air Quality by Plume Labs: your daily Air Report အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.4.10
ထုတ်လုပ်သူ Plume Labs
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://plumelabs.com/en/privacy-policy
App Name: Air Quality by Plume Labs: your daily Air Report
Release date: 2019-09-11 19:38:39
အထောက်အပံ့ပေးနိုင်သော စီပီယူ: x86, x86-64, armeabi-v7a, arm64-v8a, mips
လက်မှတ် SHA1: 8D:A8:80:C5:D6:0E:72:06:89:94:8E:BF:7A:B2:CD:B1:27:B2:46:0C
ထုတ်လုပ်သူ (CN): David Lissmyr
အဖွဲ့အစည်း (O): Plume Labs
နယ်မြေ (L): Paris
နိုင်ငံ (C): FR
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): France
Air Quality by Plume Labs: your daily Air Report APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ